Shenzhen Joint Technology Co., Ltd hwagadzwa muna 2006, vakanyorwa mazita 'jointech', uye formallylisted zvitatu itsva bhodhi muna February 2016, pamwe wemari code: 835897.
The kambani rinonyatsotarira kupa network zvikamu zviri Mobile twa monitoringand Kutarisira zvinogadzirisa, uye akaita kuti tive indasitiri wacho leadingmobile twa utariri mhinduro rubatsiro uye dzaishandisa. Pashure pemakore ofdevelopment uye kuwanda, kambani kwakasimbiswa yakakwana yakatarwa ofintelligent Hardware uye Mobile twa kutarisirwa Software gore managementplatform, kupa mumusika pamwe Software uye Hardware zvinhu uye mabasa, ndiro akura, rinobatsira, uye regardenergy zvinodyiwa uye twa kuchengeteka kutarisirwa sezvo chinoumba ukoshi.
chikuru Bhizimisi Thecompany ndokwenguva matatu makuru kure twa Kutarisira zvikamu, kusanganisira: 1. paIndaneti motokari uye huni zvinodyiwa zvichiongororwa zvakanaka uye mabasa, nokuti motokari opareta makambani avo chokuita mafuta zvinodyiwa uye vehicleposition; 2.the wose basa mudziyo uye zvinhu zvichiongororwa uye kutarisirwa, nokuti nemakasitoma vane hanya zvikuru nhumbi kuchengeteka uye chokufambisa; 3.remotemonitoring uye mashandiro samambure mabasa, nokuti simba uye powerequipment kugadzira uye kuramba kambani.
Unoita nemunhu injiniya pamwe nemakore anopfuura 30 ruzivo mune motokari kudzora mumunda, redu R & D chikwata varambe vachifambirana zvemberi michina munyika, uye yakatanga zhinji nemamwe zvinhu uye Software pamwe patents. The R & D chikwata vave kushanda pamwe neshamwari munyika 55 idzi uye kumatunhu, uyewo pamwe akapedza Kudya kubva Shenzhen University, etc.Our R & D chikwata rinoumbwa mainjiniya zvinopfuura 30 Senior uye Midlevel zvekushandisa zvinodiwa, uye akakamurwa: Hardware Group, Software Group, Testing Group, Project Group, uye boka purojekiti kuronga; JOINTECH vanoramba kuisa 8% ~ 15% wokutengesa bhuku muruoko R & D ose gore.
JOINTECH ave kuvaka mberi vaungane mutsetse withyearly vachikwanisa 100,000 mafuta pamwero sensors, The yokutanga otomatiki yokuedzwa muchina mu China nokuda dzakakwirira nemazvo huni pamwero Switch pamwe yokuedzwa vanokwanisa 500pcs pazuva.